KEDU ESI NYEFEE EGO SITE WEBMONEY GAA WEBMONEY - OKE EGO - 2019
Nyefee ego site WebMoney ka WebMoney
N'ihi n'eziokwu na mgbasa ozi zuru ezu na Periscope na echekwara maka oge dị oke, ọ pụrụ ịdị mkpa ibudata ha. N'ime ntuziaka a, anyị ga-atụle ụzọ maka ịmezi nsogbu a.
Download video site na Periscope ka PC
Naanị ndị mgbasa ozi ndị edepụtara ma chekwaa n'ihu ọha nwere ike ibudata na Periscope. Tụkwasị na nke ahụ, Intanet kwesịrị ịdị ngwa, ebe ọ bụ na faịlụ nwere ike karịa 10 GB.
Usoro 1: Naperiscope
Usoro kachasị mfe maka nbudata mgbasa ozi site na Periscope bụ iji ọrụ weebụ pụrụ iche na-enye ngwaọrụ maka nbudata vidiyo. N'ihi ngwá ọrụ a, ịnwere ike ịgbakwunye na PC gị mgbasa ozi ọ bụla echekwara.
Gaa na Naperiscope na-arụ ọrụ
Iji budata obere mgbasa ozi ọ kachasị mma iji ngwaọrụ ndị bụ isi.
Site na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla, mepee profaịlụ nke onye ọrụ a chọrọ na Periscope ma họrọ otu n'ime mgbasa ozi ndị a kwụsịrị.
Ikwesighi igodo vidiyo, wee họrọ ọdịnaya nke ebe ntanetị ma pịa igodo ọnụ "Ctrl C". Ọzọkwa, URL nwere ike depụtaghachi ya site na menu ndokwa.
Njikọ ahụ n'onwe ya kwesịrị ịdị ka nke ahụ anyị nyere:
Na-enweghị mmechi windo mgbasa ozi, na teabụ ọhụrụ, mepee ebe obibi ndị ọrụ Naperiscope.
Right-click na ederede ederede n'etiti etiti ma họrọ Tapawa ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi keyboard "Ctrl V".
N'akụkụ aka nri nke otu ubi, pịa bọtịnụ ahụ na akara ngosi ahụ "Download".
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo nchọgharị windo mepee iji chekwaa faịlụ ahụ na PC. Họrọ ndekọ ahụ chọrọ ma pịa "Chekwa".
Ọ bụrụ na ị zutere njehie mgbe ị na-agbalị ibudata, gbalịa ibudata iyi ahụ ka obere oge. O nwekwara ike inyere aka melite ibe ọrụ na vidiyo na Periscope.
Nbudata nnukwu mgbasa ozi na-esiri ike n'ihi oke ha. Karịsịa na nke a, ịnwere ike ịbanye na mpaghara.
Rịba ama: Ugbu a, arụmọrụ ka na-anwale ule beta ma ya mere njehie nwere ike ime mgbe ụfọdụ n'oge usoro nbudata.
Iji budata, ị ga-aga na ọwa Periscope ọrụ ma detuo njikọ ahụ na ndekọ ya.
Na Naperiscope ọrụ ụlọ obibi, pịa "Mgbasa ozi m dị oke".
Hichaa URL e depụtara na mbụ n'ime igbe ederede wee pịa "Lelee".
Na njedebe nke nyocha vidio, ọrụ weebụ ga-enye ozi ndị bụ isi banyere oge na ọnụ ọgụgụ nke iberibe. Pịa otu n'ime bọtịnụ. "Download"ibudata akụkụ ọ bụla nke mgbasa ozi ahụ.
A na-echekwa ndekọ ahụ na usoro TS.
Ogologo mgbasa ozi ịchọrọ na-adịkwu ogologo ma dịkwuo mma, ihe ndekọ vidio ga-ekewa ọzọ na akụkụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ekewara ọrụ nke ihe karịrị 5040 nkeji n'ime akụkụ 95.
Maka enyemaka, ị nwekwara ike bulite mgbasa ozi nkeonwe. Otú ọ dị, nke a bụ nanị mgbe ị debanyere aha na saịtị ma ọ bụ naanị ndị nwe vidio.
Usoro 2: Nbudata Ntanetị Ịntanetị
Nchịkọta Ihe Ntanetị Ịntanetị na-enye gị ohere ibudata faịlụ site na Ịntanetị n'ime ọtụtụ iyi site na iji mgbakwunye pụrụ iche akwado site na ihe nchọgharị ọ bụla. Tinyere ngwanrọ nwere ike ịbanye ma budata mgbasa ozi echekwara site na Periscope.
Download Nbudata Nbudata Ịntanetị
Mgbe ị nyochachara nyochaa nke usoro ihe a, budata ma wụnye ya na kọmputa gị. Ọzọkwa, jide n'aka na ịmalitegharia ihe nchọgharị weebụ gị, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kwadoro mwekota.
Mepee ọwa nke onye ọrụ ị nwere mmasị na Periscope ma họrọ ntinye mgbasa ozi ị chọrọ ibudata na kọmputa gị. N'okwu a, oge agaghị adị mkpa, ebe ọ bụ na a ga-ebudata faịlụ niile nke vidiyo n'otu oge.
Gwuo mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ọ meghị na akpaghị aka.
Mgbe nke ahụ gasịrị, bọtịnụ ahụ ga-apụta na ihuenyo ahụ. "Download vidio a" ma ọ bụ "Nbudata vidiyo site na ibe a". Pịa ya iji bido usoro nbudata.
Na windo "Download Ozi Njikwa" Ị nwere ike ịgbanwe ndekọ nduzi ya ma ọ bụ kwụsị oge nbudata. Iji budata pịa "Nbudata mmalite".
Ihe nbudata ihe odide ihe omume mara ngwa ngwa.
Site na windo "Download zuru ezu" ị nwere ike igwu vidiyo site na ịpị "Meghee".
N'oge a, usoro nke nbudata vidiyo site na Periscope na kọmputa nwere ike ịre zuru oke. Iji kpọọ faịlụ ị chọrọ ọkpụkpọ mgbasa ozi na nkwado maka usoro TS.
Hụkwa: Ndị na-egwu maka ikiri vidiyo na PC
N'ihi ọdịdị nke koodu ahụ, mgbe ị na-egwu faịlụ na usoro TS, enwere ike ịnwe ma ọ bụ ihe oyiyi oyiyi. Ihe kachasị anya dị ka oge ịkwụsị ma weghachi video.
Mepee XLS faịlụ
Chọọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Lenovo B50
Ịhazi tebụl na Microsoft Okwu
Kedu ka esi mee ka ihe nkiri Windows Windows Maker maka Windows 7, 8 na Windows 10 budata
Ihe ndekọ ahụ bụ ihe ndabere nke ezinụlọ Windows nke sistemụ arụmọrụ. Ndepụta a nwere data nke na-akọwa ntọala zuru ụwa ọnụ na mpaghara maka onye ọrụ ọ bụla na maka usoro a dum, na-achịkwa ihe ùgwù, nwere ozi gbasara ọnọdụ nke data niile, nkwenye na ndebanye aha ha. Iji nweta ihe ndekọ ahụ n'ụzọ dị mfe, ndị mmepe Microsoft nyere ngwá ọrụ a na-akpọ Regedit (Registry Edit bụ editọ ndekọ). GụKwuo
Nwelite nwelite na Beeline USB modem